जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माईकाे दर्शन गरी हेर्नुस् जेठ १४ गते शनिबारकाे राशिफल ! - News 88 Post
May 27, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माईकाे दर्शन गरी हेर्नुस् जेठ १४ गते शनिबारकाे राशिफल !
मेष राशि : रचनात्मक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। कामको प्रशंसा हुनेछ। सुख र सन्तुष्टि मिल्नेछ। यात्रा रमाइलो हुन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा नयाँ प्रयोग गर्न सकिनेछ । समयको अनुकूलताको फाइदा लिनुहोस्। धन प्राप्ति सहज हुनेछ। काममा अनुकूलता रहनेछ। कामको बोझ र अधिकार बढ्न सक्छ।
वृष राशि : विवादलाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस्। अनावश्यक वादविवाद हुनसक्छ । स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ । थकान र कमजोरी रहन सक्छ। लेनदेन गर्न हतार नगर्नुहोस्। धन हानि हुने सम्भावना छ । व्यापारमा सुस्तता आउन सक्छ। आम्दानीमा निश्चितता रहनेछ। समय चाँडै सुधार हुनेछ।
मिथुन राशि : साथीभाइसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ। व्यापार–व्यवसाय तपाईको इच्छा अनुसार चल्नेछ । शेयर बजार तथा म्युचुअल फण्डबाट लाभ हुनेछ । यात्रा सफल हुनेछ। शत्रु सक्रिय रहनेछन् । चिन्ता र तनाव रहनेछ। अर्को व्यक्तिको काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। विवाद हुनेछ ।
कर्कट राशि : आत्मसम्मान रहनेछ। उत्साहजनक जानकारी पाउनुहुनेछ। बिर्सिएका आफन्तजनसँग भेटघाट हुनेछ । व्यापारमा अनुकूलता रहनेछ। स्वास्थ्य कमजोर रहन सक्छ। जोखिम र संपार्श्विक कार्यहरूबाट बच्नुहोस्। बुद्धिको प्रयोगले लाभ बढ्नेछ। खुसी रहन्छ। प्रलोभनमा नपर्नुहोस्
सिंह राशि : बेरोजगारी हटाउने प्रयास सफल हुनेछन्। नयाँ वस्त्र प्राप्त गर्न सकिनेछ । काममा प्रभाव बढ्नेछ। यात्रा लाभदायक हुनेछ। शेयर बजार तथा म्युचुअल फण्डले राम्रो लाभ दिनेछ । खुशीको वातावरण रहनेछ। जोखिम र संपार्श्विक कार्यहरूबाट बच्नुहोस्। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
कन्या राशि : स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ। जोखिम र संपार्श्विक कार्यहरूबाट बच्नुहोस्। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन हतार नगर्नुहोस्। अनावश्यक खर्च हुनेछ । ऋण लिनुपर्ने हुनसक्छ । आम्दानी घट्नेछ । तपाईंसँग बहुमूल्य चीजहरू राख्नुहोस्। व्यापार व्यावसाय राम्रो हुनेछ । बेकारका कुराहरूमा ध्यान नदिनुहोस्।
तुला राशि : यात्रा अनुकूल रहनेछ। नयाँ काम मिल्नेछ । नयाँ सम्झौता हुनेछन्। खराब धन फिर्ता हुन सक्छ। व्यापार बढ्नेछ। काममा प्रभाव बढ्नेछ। समय अनुकूल रहनेछ, सदुपयोग गर्नुहोस्। जोखिम मोल्ने हिम्मत छ । आम्दानी बढ्नेछ ।
वृश्चिक राशि : कार्यस्थलमा सुधार र परिवर्तन हुन सक्छ। योजना सफल हुनेछ। तत्काल कुनै लाभ हुनेछैन। लगानी गर्न हतार नगर्नुहोस्। आम्दानीका नयाँ स्रोत जुट्न सकिनेछ । रोकिएका काममा गति आउनेछ । जोखिम मोल्ने हिम्मत छ । प्रलोभनमा नपर्नुहोला ।
धनु राशि : अध्यात्ममा प्रवृत्ति रहनेछ। सत्संगको लाभ मिल्नेछ। राजनैतिक बाधा हटेर लाभदायक स्थिति बन्नेछ । व्यापार बढ्नेछ। वरपरको वातावरण रमाइलो रहनेछ। साथीभाइ तथा दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ । विवादलाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस्। विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। प्रलोभनमा नपर्नुहोला ।
मकर राशि : स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ। क्रोध र उत्तेजनालाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। चोटपटक तथा दुर्घटनाबाट ठूलो धनजनको सम्भावना छ, सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । लेनदेनमा हतार नगर्नुहोस्। आम्दानी जारी रहनेछ। जोखिम र संपार्श्विक कार्यहरूबाट बच्नुहोस्। व्यापारको गति सुस्त रहनेछ ।
कुम्भ राशि : अदालत र अदालतको काम अनुकूल रहनेछ। व्यापार यात्रा सफल हुनेछ। लाभको अवसर आउनेछ । व्यापार व्यावसायमा लाभ हुनेछ । काममा प्रभाव बढ्नेछ। जीवनसाथीबाट सहयोग मिल्नेछ । घरबाहिर खुशीको वातावरण रहनेछ। लेनदेनमा सावधानी अपनाउनुहोला । धन हानि हुने सम्भावना पनि छ ।
मीन राशि : जग्गा, घर, घर, पसल आदिको खरिदबिक्रीले शुभ लाभ मिल्नेछ। बेरोजगारी हट्नेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत जुट्न सकिनेछ । भाग्यले साथ दिनेछ। चारैतिर सफलता मिल्नेछ। घर बाहिर खुसी रहनेछ। उत्साह कायम रहनेछ। चिन्ता र तनाव कम हुनेछ।
Tagged आजको राशिफलदैनिक राशिफलसुपादेउराली दर्शनसुपादेउराली मन्दिर
November 17, 2021 N88
स्नातक तहका परीक्षा आगामी साउनमा
नेपाली खाना र स्वादलाई विश्वव्यापी बनाउनु : मन्त्री आले
April 11, 2022 N88